Wacaal darey ah: Qarax ka dhacay Muqdisho – Radio Daljir
Wacaal darey ah: Qarax ka dhacay Muqdisho
Oktoobar 5, 2018 10:08 b 0
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada Somaaliya ayaa sheegaya in goor dhawayd Qarax xoogan uu ka dhacay meel ku dhaw Warshadda Baastada ee degmada Yaaqshiid.
Qaraxan ayaa sida uu ku soo waramayo wariyaha Daljir ee magaalada Muqdisho ahaa Miino dhulka loogu aasay Ciidamada AMISOM oo maraya wadadaasi.
Wararka ayaa sheega in Qaraxan uu khasaare ka soo gaaray ciidamada AMISOM .
Ma aha wax ku cusub qaraxyada noocan oo kale ah magaalada Muqdisho, waxayna Qaraxyadan ay dhacaan maalinkasta xiliyada ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay isticmaalaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ku soo beegmaya xili maanta Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Al-shabaab ayaa sheegatay mas,uuliyada Qaraxan.
Jubbaland oo taliye u magacwday howlgalka Jubbooyinka